ပင်မစာမျက်နှာ Tags: မိတ်ကပ်
မျက်လုံး၏အရေးပါမှုသည်သာဗေဒမဟုတ်ပါ၊ သို့သော် FUNTIONAL အားလုံးအထက်
Loris ချစ်သူများနေ့ - ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2020 0
မျက်ခုံးများ၊ မျက်နှာနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြည့်ကိုသဟဇာတဖြစ်စေသောမုတ်နှစ်ခုရှိသည်။ မျက်နှာ၏လှပမှု၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည် ... သို့သော်
Giulia Caruso - အောက်တိုဘာလ 4, 2019 1
အပြည့်အဝနှင့် sexy နှုတ်ခမ်း၏အိပ်မက်? ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ဗေဒဆိုင်ရာဆေးပညာကိုမသုံးပဲငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်ရတာလဲ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ ? ဘယ်နေရာမှာလဲ။
FULL FACE ပထမ ဦး ဆုံးအထင်အမြင် | မိတ်ကပ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စမ်းသပ်သည်။
ကလောဒီယာ Pellicciaro - ဇန်နဝါရီလ 20, 2018 0
ဒီမှာကမိန်းကလေးတွေပါ၊ ဒီဗီဒီယိုအမျိုးအစားကို "မျက်နှာအပြည့်မျက်နှာထားဆွဲခြင်း" လို့ခေါ်တယ်၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့သူတို့အတွက်ငါတို့အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ဗွီဒီယိုတွေ ...
Loris ချစ်သူများနေ့ - ဒီဇင်ဘာလ 10, 2017 0
Magda ကငါတို့ကိုစင်နောက်ကသတို့သမီးကိုခေါ်သွားတယ် Sposa အတွက်စုစုပေါင်းပြင်ဆင်မှုတွေ Make Up မှဆံပင်ပုံစံအဆင့်ဆင့်
Loris ချစ်သူများနေ့ - ဒီဇင်ဘာလ 5, 2017 0
... နှင့် Total for Academy အတွက်လေ့ကျင့်ရေးဒါရိုက်တာ MUSA Talent Aspire Pablo Ardizzone သည်မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျောက်မျက်အချို့နှင့်လှည့်ကွက်အချို့ကိုဖော်ပြသည်။ VIPs နှင့်အိမ်ရှင်မများ ...
Cosmoprof Worldwide Bologna ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှု